စုံစမ်းရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း | Lumyo Chit
၁။ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်သစ်သို့ ရောက်ရှိစေရန် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုများ ဆောင် ရွက်ပေးနေ သ ကဲ့သို့ နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ် ကို လေးစား လိုက်နာရေးအ တွက်ကိုလည်း အဆင့်ဆင့်လေ့ ကျင့်ပေး လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလနှင့်ဇွန်လအတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုဒမိုးရေး ပျက်ပြားစေသည့် လူစုလူဝေးဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့၍ ဥပဒေမဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများ မင်းမဲ့စရိုက် ဆန်ဆန် လူအုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ် မှုများဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များအပေါ် ဖြစ်ရပ်အမှန် ဖေါ်ထုတ်နိုင်ရေး နှင့် ဥပဒေနှင့် အညီ ရေးယူနိုင်ရေး တို့အတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ စုံစမ်း စစ်ဆေးေ ရး အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာ ဝန်ပေး လိုက်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သတ်၍ ဖြစ်ရပ်မှန်များဖော် ထုတ်နိုင်ရေး၊ ဥပဒေနှင့် အညီအရေးယူနိုင်ရေးတို့အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တို့ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အနေဖြင့် အစီရင်ခံစာကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံရမည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
This entry was posted in Untags and tagged News. Bookmark the permalink.
← ကိုမြအေး ပြတ်တယ်၊ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အတူရပ်မယ်တဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုလိုက်တယ်
အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူများဟု ပြင်ဆင် & Rohingya Blogger – Link →